धेरै कठिन र हताश अवस्थामा को लागी सेन्ट जुडे Thaddeus लाई प्रार्थना। ?
4 न्यूनतम पढाई
प्रार्थना गर्न सेन्ट जुड थडियस धेरै गाह्रो र असाध्य घटनाहरूका लागि एक व्यक्तिले गर्न सक्ने सबै अनुरोधहरू मध्ये, त्यहाँ अरू भन्दा बढी गाह्रो केसहरू छन्। यी लागि यो शक्तिशाली प्रार्थना छ।
यहाँ तपाईं साधारण वा बेकारका चीजहरूको लागि सोध्न सक्नुहुन्न, कि यो प्रार्थना विशेष प्रकारको चीजहरूको लागि सोध्नु हो जुन चमत्कारपूर्ण उपचारको रूपमा असम्भव छ, उदाहरणका लागि।
स्वास्थ्य मामिलाहरू धेरै सामान्य हुन्छन्, यद्यपि तपाईं अरू केहि सोध्न सक्नुहुन्छ।
केसहरूमा जहाँ हराइरहेका व्यक्तिहरू, बच्चाहरू वा वयस्कहरू छन्, सान जुडास टेडेओलाई उनीहरूलाई घर फर्कने बाटो देखाउन भनियो।
मुख्य कुरा यो हो जुन विश्वासको साथ बनेको छ।
कुनै चमत्कार हेर्न व्याकुल हुनु सामान्य कुरा हो, धेरै चोटि यस्ता परिस्थितिहरू हुन्छन् जुन अन्धकारमा देखिन्थ्यो तर ती अवस्थाहरूमा प्रार्थना हाम्रो शान्ति र विश्वासको एक मात्र स्रोत हुन सक्छ।
1 धेरै गाह्रो र असाध्य घटनाहरूका लागि सेन्ट यहूदा ताडेओलाई प्रार्थना गर्नुभयो ऊ को हो?
2 धेरै गाह्रो र असाध्य घटनाहरूका लागि सेन्ट जुड थड्डियसलाई प्रार्थना
3 के प्रार्थना शक्तिशाली छ?
4 सेन्ट जुडे थड्डियसले कहिले प्रार्थना गर्नु पर्छ?
धेरै गाह्रो र असाध्य घटनाहरूका लागि सेन्ट यहूदा ताडेओलाई प्रार्थना गर्नुभयो ऊ को हो?
कुनै समाधान नभएको जस्तो देखिएमा संत हुनका लागि परिचित छ। बाइबलका सुसमाचारका पुस्तकहरूमा येशूका बाह्र चेलाहरूमध्येका एकको रूपमा उहाँ उल्लेख गरिएको छ।
बाह्र प्रेरितहरू मध्ये एक भएको कारण जब उहाँ यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला उहाँ प्रभुको नजिक हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ यहूदा इस्करियोतसँग अक्सर अलमल्लमा पर्नुहुन्छ जसले येशूलाई फरिसीहरूलाई दिनुभयो।
यहूदा टेडेओसँग धेरै ठोस जानकारी छैन जसले हामीलाई यो कहाँबाट आयो भनेर बताउँछ, तर के थाहा छ यो असम्भव चमत्कारहरू प्रदान गर्ने यसको शक्ति हो।
उहाँ आज सबैभन्दा आमन्त्रित संत मानिन्छ, त्यसैले उनको ईतिहासको बारेमा अलि बढी जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
उहाँको चमत्कारी शक्ति यस तथ्यमा निहित छ कि ऊ हामी र येशूका बिचमा मध्यस्थको रूपमा काम गर्दछ, यस प्रकारले यो विश्वास गरिन्छ कि आकाशीय सिंहासनको अगाडि अनुरोधहरूले अझ बढी महत्त्व लिन्छ र यस कारणले उनीहरूले जवाफ पाइरहेका आश्चर्यकर्म जुनसुकै गाह्रो वा गाह्रो भए पनि द्रुत रूपमा जवाफ दिइन्छ। मा प्रार्थना.
ओहो गौरवशाली प्रेरित सेन्ट जुड! विश्वासी दास र येशूको साथी। देशद्रोहको नाम जसले तपाईंको प्रिय मास्टरलाई उसको शत्रुहरूको हातमा दियो कि धेरैले तपाईंलाई बिर्सेका छन्। तर चर्चले विश्वव्यापी रूपमा तपाईलाई गाह्रो र व्याकुल मामिलाहरूको संरक्षकको रूपमा सम्मान र आग्रह गर्दछ।
मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् कि म अत्यन्त दुखी छु र प्रयोग गर्न सकूँ, म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईंलाई यो विशेष सुअवसर प्रदान गरिएको छ। जसको साथ दृश्यात्मक र तुरुन्त सहयोग गर्न जब लगभग सबै आशा हराइसक्यो।
यस ठूलो आवश्यकतामा मेरो सहायता गर्न आउनुहोस्।
यसैले मैले मेरा सबै आवश्यकताहरू, सulations्कष्ट र कष्टहरूमा स्वर्गबाट ​​सान्त्वना र सहयोग पाएको छु, विशेष गरी (यहाँ तपाईंको प्रत्येक विशेष प्रार्थना गर्नुहोस्।) र तँलाई सदासर्वदाका लागि र तपाईं छानिएका सबैलाई परमेश्वर धन्य दिन सक्नुहुन्छ।
म तपाईंलाई महान् संत जुडालाई वचन दिन्छु कि यो महान अनुग्रहलाई सँधै सम्झना गर्दछु र म तपाईंलाई मेरो विशेष र शक्तिशाली संरक्षकको रूपमा सम्मान गर्न कहिल्यै रोक्ने छैन र तपाईंको भक्तिलाई बढावा दिन म सक्दो पनि गर्नेछु।
टर्मिनल रोगहरू जस्तै क्यान्सर, दुखद दुर्घटनाहरू, हराइरहेका व्यक्तिहरू, अपहरण, डकैतीहरू र सबै अनुरोधहरू जुन कठिन मानिन्छन् ती हुन् जुन यस संतलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
तपाईले के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भनेर तपाइँले विशेष रूपमा सोध्नुपर्दछ, यसका लागि तपाईले केस राम्ररी थाहा पाउनुपर्दछ, हामी कसैलाई निको पार्न भन्न सक्दैनौं, विशेष गरी व्यक्तिको नाम र रोगको नाम प्रयोग गरेर प्रार्थना गर्न सक्षम हुनु राम्रो हुन्छ, उदाहरणका लागि। ।
हराएका कारणहरूमा विशेषज्ञ, ती अवस्थाहरूमा जहाँ मानिसहरूले विश्वास गुमाएका छन्, जहाँ त्यहाँ कुनै आशा छैन।
ती पलहरू हुन् जब यो रोजगारदाताको शक्ति उपस्थित हुन्छन्। हामीलाई विश्वास कायम राख्न र स्टोक गर्न मद्दत गर्ने सन्तलाई विश्वास गर्ने क्षमता बचाउनमा विशेषज्ञ।
के प्रार्थना शक्तिशाली छ?
के धेरै सेन्ट जूडे थडियसलाई धेरै गाह्रो र असाध्यै कठिन परिस्थितिको लागि प्रार्थना गर्ने कुरा यो हो जुन विश्वासले यसलाई बनाएको हो।
परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ कि यदि हामीले पितालाई विश्वास गर्न भन्यौं भने उहाँले हामीलाई चमत्कार प्रदान गर्नुहुनेछ।
त्यसकारण हामी बुझ्न सक्दछौं कि वाक्यलाई केहि नतिजा ल्याउन मात्र यो आवश्यकता हुन्छ। विश्वास बिना नै सोध्नु कि हामी परमेश्वरको निगाहमा भर पर्न सक्छौं र सहायता गर्न व्यर्थ प्रार्थना गर्नु हो।
हामी केहि सोध्न सक्दैनौं जसलाई हामी विश्वास गर्दैनौं जुन हामी सोध्यौं हामीलाई दिनुहुन्छ। सोधिएको सबै हृदयको गहिराइबाट विश्वास हुनुपर्दछ।
एक साँचो विश्वास परमेश्वर, सबै कुराका सृष्टिकर्ता, हामीलाई चाहिएको सबै चीजहरूमा हामीलाई मद्दत गर्न अझै शक्तिशाली हुनुहुन्छ र आफ्ना सन्तहरू यसलाई प्राप्त गर्न मद्दत गर्न उहाँसँग हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईंलाई आवश्यक परेमा प्रार्थना गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
सेन्ट जुडे थड्डियसले कहिले प्रार्थना गर्नु पर्छ?
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि यस शक्तिशाली प्रार्थना कहिले गर्नु पर्छ?
तपाईलाई सेन्ट जुड थड्डियसलाई प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ धेरै गाह्रो र असाध्य अवस्थामा जब तपाईंलाई आवश्यक परे।
यस शक्तिशाली सन्तले तपाईका सबै अनुरोधहरू सुन्छ, यसका लागि विश्वासका साथ र हृदयमा विश्वासको साथ प्रार्थना गर्न पर्याप्त छ।
तपाईं दिन वा ओछ्यान भन्दा अघि वा हरेक दिन उठ्नुपर्दा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग समय छ भने, हामी तपाईंलाई सेन यहूदा टाडेओलाई प्रस्ताव गर्नको लागि सेतो मोमबत्ती जलाउने सल्लाह दिन्छौं।
17 सक्छ, 2020